Firefox 82 inosvika ichivimbisa kukurumidza kumhanya | Linux Vakapindwa muropa
Mozilla yanga yakarongerwa kuvhura nhasi Firefox 82, uye nguva iyoyo yakatoitika. Mushure memavhiki mana ekuvandudza ayo akajairwa iwo angangoita gore uye mushure meiyo Firefox 81 iyo yakagamuchira maviri ekugadzirisa ekugadzirisa, kuburitswa kutsva kwakauya kunovimbisa kumhanyisa kwakanyanya mune ese mashandiro masisitimu, asi ichiri Windows iri kuona kuti WebRender inogoneswa sei nekutadza.
Kana dziri dzimwe nhau, Mozilla yatora mukana kuvhurwa kweFirefox 82 kusvika wedzera yako Mufananidzo-mu-Mufananidzo, inozivikanwawo sePiP. Mune ese masisitimu anoshanda, bhatani idzva rinozoita kuti ive intuitive yekushandisa. Kune vashandisi veMacOS, ivo vawedzera nzira pfupi iyo inoshanda usati wavhura vhidhiyo. Pazasi iwe une rondedzero pamwe neasara ese enhau.
1 Chii chitsva muFirefox 82
2 Ikozvino inowanikwa kune ese akatsigirwa masisitimu
Chii chitsva muFirefox 82
Bhatani reMufananidzo-Mu-Mufananidzo rine chitarisiko chitsva uye chinzvimbo, zvichiita kuti zvive nyore kuwana uye kushandisa basa racho.
Mufananidzo-Mu-Mufananidzo ikozvino une nzira pfupi yekhibhodi yevashandisi veMac (Sarudzo + Command + Shift + Right Bracket) inoshanda usati watanga kutamba vhidhiyo.
Kune vashandisi veWindows, Firefox ikozvino inoshandisa DirectComposition ye Hardware yakatemwa vhidhiyo, iyo ichavandudza CPU neGPU kushandiswa panguva yekutamba vhidhiyo, kuvandudza hupenyu hwebhatiri.
Firefox inokurumidza kupfuura nakare kose nekuvandudza mashandiro mune ese maviri peji mitoro uye nguva yekutanga.
Kudzorera chikamu chiri 17% nekukurumidza, zvinoreva kuti iwe unogona kutora kwawakasiya nekukurumidza.
Kune vashandisi veWindows, kuvhura windows nyowani kwakagadzirwa nekukurumidza ne10%.
Iwe unogona ikozvino kuongorora zvinyorwa zvitsva kana uchichengeta peji rewebhu kuPocket kubva kuFirefox turu yekushandisa.
WebRender inoenderera ichitenderera kune vamwe vashandisi veFirefox paWindows.
Ndima inoratidzira yekuverenga skrini muverengi izvozvi nemazvo taura ndima muFirefox pane mitsara.
Otomatiki kiredhiti kadhi yekuzadza ikozvino yave kuwanikwa nemhando yekadhi, uye iyo kadhi nhamba mune iyo kadhi mhariri ikozvino yave kuwanikwa kuongorora screen.
Yisiriyo fomu yekudhinda yekudhirowa dialog zvikanganiso izvozvi zvataurwa kune vanoverenga screen.
MediaSession API yakagoneswa nekusarudzika, ichibvumira vanyori vewebhu kuti vape maitiro etsika ekudyidzana kwemidhiya yekutamba, ichivapa dzimwe sarudzo kupfuura nakare kose.
DevTools ikozvino inoratidza server-padivi zviitiko mu Network paneli. Izvi zvinobvumidza sevha kutumira dhata nyowani kune peji rewebhu chero nguva, ichibvumira vanogadzira kuti vaone zviitiko zvavakatadza kare uye kubatsira nekutarisana nedambudziko repazasi.
Ikozvino inowanikwa kune ese akatsigirwa masisitimu
Firefox 82 ikozvino yave kuwanikwa kune ese akatsigirwa masisitimu kubva kune yepamutemo webhusaiti, iyo yatinogona kuwana kubva Iyi link. Izvo zvinotevedzwa nevashandisi veLinux kubva ipapo pachave nekuzvigadziridza yega yega bhainari, nepo isu vedu tiri kushandisa vhezheni kubva kumahofisi epamutemo ekuparadzira kwedu vachazofanira kumirira zvishoma kuti pasuru nyowani iite seyakagadziriswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Firefox 82 inosvika ichivimbisa kukurumidza kumhanya uye idzi dzimwe nhau
Asi hesi, ava ndivo varume veMozilla assholes? Iyo Windows musika wakarasika, kuti hapana munhu ane Windows anoshandisa Firefox! Kuti iri Linux iyo yavanofanira kupuruzira, iyo hafu yevashandisi vavo vanoshandisa FF, uye panzvimbo peizvozvo, ivo vanotibata isu seyekupedzisira shit ... nguva dzose vachiburitsa kwakakosha kuvandudzwa kwevashandisi veWindows uye zvakanyanya kumagumo "Ivo port ivo kuLinux, uye ini ndoti "hongu kana izvozvo" nekuti dzimwe nguva hapana: FF inoramba ichishanda zvakanyanya muLinux pane muWindows narinhi, uye Mozilla inoita senge haina basa.
Ipapo ivo vachatiudza kuti isu tinoshanda pamwe nechirongwa nekupa mari. Chii che, kuramba uchishandira Windows? Kwete nemari yangu, ndatenda.
Bvisa zvese zvinosuruvarisa kushambadza zvakavanzika, iko kusaremekedza vashandisi nerusununguko